Ukusetshenziswa Kwesayithi ye-Cannabis - Isihlahla Sokugcina Sokuvinjezelwa kweMalijuana Ukuwa
Ukusetshenziswa Kwesayithi ye-Cannabis
Kuyini Ukusetshenziswa Komphakathi Kwe-Cannabis?
Ukusetshenziswa Kwasendaweni ye-Cannabis noma Ukusetshenziswa Komphakathi kweCannabis Sekuyisikhathi eside kuxhunyaniswa ngezinto ezingezinhle, kusukela ekuphukeni kwaso kube nemithelela emibi esetshenzisiwe emzimbeni womuntu. Yize i-cannabis iba ngumthetho ngokomthetho noma ngokuzijabulisa ezifundweni eziningi, ukusetshenziswa komphakathi noma kwezenhlalo kwe-cannabis kuhlala kungenamthetho ikakhulukazi. Lokhu kungumphumela oqondile wokubandlulula okugunyazwe yi-feder kusuka ngo-1937, ucwaningo oluyi-zero luzongena kunoma iyiphi inzuzo ye-cannabis futhi kuvunyelwe kuphela ukuthola imithelela emibi kanye nokulimala kokusetshenziswa kwe-cannabis. Ngenxa yalesi sizathu impela, i-Israel hhayi i-United States ihlala iyisazi sesayensi ye-cannabis.
Yini izindawo ukusetshenziswa komphakathi kwe-cannabis okubizwa?
Amakhekhe kaMarijuana (cannabis)
Amaklabhu we-canannis Supper
Izitolo Zekhofi zaseCannabis (Amsterdam)
Amabha weCannabis / Pubs
Amaklabhu Wenhlalo Yokulawula Nama -annannis
Funda UThomas 'Article mayelana nokusetshenziswa komphakathi kweCannabis kuMbiko weCannabis Law & Regulation Reporter - lapha.
Osomabhizinisi baseCannabis kufanele babheke Okuhlinzekwayo Okujwayelekile okutholakala ngaphansi kweSigaba 55 soMthetho omusha we-Illinois Cannabis Regulation and tax Act (“Umthetho”), 410 ILCS 705 / 55-25. Masikubeke ekhasini lakho:
Ukusetshenziswa Kwesimo Sokusetshenziswa Kwezimiso Ze-Cannabis
Isigatshana esivumayo asivumeli kuphela "izikhungo zebhizinisi le-cannabis" ukuthi zisetshenziswe esizeni, kepha futhi nanoma iyiphi enye inhlangano egunyazwe uhulumeni wasekhaya. Umthetho uchaza "izikhungo zebhizinisi le-cannabis" ngaphansi kwendatshana yencazelo yalo njenganoma yiliphi ibhizinisi elinelayisense le-cannabis. Umthetho uyaqhubeka futhi unikezela ngamalungelo ongeziwe kohulumeni basekhaya ukwandisa ukusetshenziswa kwe-cannabis ngaphezulu kwezikhungo zebhizinisi ze-cannabis, njengama-dispensaries, kunoma iyiphi inhlangano egunyaziwe.
Ohulumeni basekhaya basebenzisa amandla amaningi uma kukhulunywa ngemithetho ye-cannabis, naphezu kwezifundazwe zibeka uhlaka olusemthethweni. Amazwe amaningi avumela omasipala ukuthi babeke inani lamalayisense we-cannabis emandleni abo. Ngenkathi i-Illinois inophahla olugunyazwe nguhulumeni kumalayisense wayo we-cannabis, umasipala ungabeka "imithetho efanelekile yokubekelwa indawo" ukulawula izinhlaka zebhizinisi le-cannabis.
Uhulumeni wasekhaya angavimbela ukusungulwa kwamabhizinisi e-cannabis futhi enze imigomo efanelekile mayelana nezinombolo zawo, amabanga avela ezindaweni ezithathwa njengebucayi ngumasipala, futhi nezinye izikhathi, indawo nezindlela zendlela.
Ukucabanga ngaso sonke isikhathi kuhlala kungukuhlola okujulile okusekelwe ezimweni, kepha futhi kunikeza ohulumeni basekhaya izindlela ezintsha nezokuqamba zokuqhakambisa amabhizinisi ahlobene ne-cannabis futhi bakhiphe imali.
i-analog yakudala eya esikhaleni sokusetshenziswa komphakathi kwe-cannabis ibha ekhonza utshwala. Imvamisa, omasipala abanomthetho owodwa nje wotshwala.
Ukubuyekezwa kwezimiso zedolobha lakithi kuholele kumalayisense otshwala be-Class A ngokusebenzisa u-L, namanye amakilasi ayisikhombisa. I-Cannabis iveza ngokuhlukahluka okuningi okulayisensi yokusebenzisa komphakathi, futhi nangaphezulu.
Omasipala bangavumela ukuthi kubizwe imisindo lapho abantu bengadla khona imikhiqizo eyenziwe nge-cannabis yodwa ngenxa yephrofayili yezokuphepha ehambisana nesikhathi esifushane semiphumela yokuhogela i-cannabis, kepha ukufaka ibha. Noma umasipala angaba nokuqina okuqinile, okucaciswe njengokuqondakalayo, imithethonqubo ephathelene nokusetshenziswa komphakathi kwemikhiqizo edliwayo ye-cannabis ukuhlinzeka onogada abengeziwe ekuphepheni ku-dosing. Izingibe ezithile zingahle zivele nabantu abangasetshenziselwa ukuqala nobude obuhlukile bokudla ngokuhambisana ne-cannabis esetshenzisiwe. Ukufundisa abathengi nomphakathi jikelele kuhlale kungukhiye ekuqhubekeni komthetho nakulawulo olunengqondo.
Ngaphezu kwalokho, lo mthetho awunikezeli ngokuqondile amakilabhu wesidlo se-cannabis lapho abapheki balungiselela khona izitsha zokungena ezifakwayo zangokuhlwa ze-cannabis. Mhlawumbe imithetho efanele yokusebenzisa indawo esekwe ngumasipala ihlinzeka indlela yokufeza lezo zinjongo. Kuyavunywa, i-dispensary iyodwa ngeke idale izitsha ezifakiwe. Futhi, imithetho yoMthetho ayifanele izinyanga ezimbalwa. Isikhathi sizosho ngokusetshenziswa kwezenhlalo e-cannabis e-Illinois kuya ngokuthi ohulumeni bomasipala banquma ukwenzani nge-cannabis emiphakathini yabo.
Njengomthetho wotshwala kanye nokuhlukaniswa kwabo okuningi njengesiqondisi kulokho okungenzeka kusetshenziswa ukusetshenziswa kwezenhlalo kwe-cannabis, kanye nokusetshenziswa okubanzi kwegama elithi "ibhizinisi eligunyaziwe" ngaphansi koMthetho walabo abangase basebenzise indawo, isibhakabhaka umkhawulo. Ukusetshenziswa komphakathi kunqatshelwe, kepha mhlawumbe imicimbi yangasese, njengomkhosi womculo, ingakwazi ukuthola uhlobo olukhethekile lwelayisense le-cannabis. Mhlawumbe owelaphi we-massage ongasendaweni angaqala ukusebenzisa i-cannabis topicals ezigulini. Isigaba se-Yoga singaba nomcimbi ngokumatanisa okuhlanganisiwe kwesokudla kwe-asanas yakho. Amabhisikidi akhethekile amakhekhe asesikhala futhi abambe kokubili ama-cannabis infuser kanye namalayisense we-dispensary kungenzeka ngolunye usuku abe yiqiniso.
Umehluko phakathi Kwezinsizakalo Nokuthengiswa Kokusetshenziswa Kwabantu Abasebenza Cannabis
Izimvume zokusetshenziswa kwezenhlalo kaMasipala futhi zisho imali eyengeziwe yomphakathi. Ngokuvamile abathengisi bakhokha izintela ezivulekile zababhiya notshwala ababuthengisayo. UMthetho uhlinzeke imali yentela zombuso kanye nomasipala ngokuthengiswa kwama-cannabis kuma-dispensaries. Mhlawumbe umasipala ungakhokhisa intela ethize ngokuthengiswa kokudla okuhlanganisiwe endaweni yokudlela esendaweni, uthatha lo mthetho nemithetho yawo ezayo ukuze uvumele lolo hlobo lokudla okuvinjelwe. Kuthiwani nge-massage Therapist efuna ukusebenzisa i-cannabis ukwenza imisipha yezinhlungu? Kufanele kube insizakalo ngoba ama-dispensaries kuphela angathengisa i-cannabis efakwe ngaphambili. Kodwa-ke, umasipala ungakhokhisa imali yemvume yokusetshenziswa okunjalo futhi mhlawumbe ungalawula inani le-THC ekunciphiseni izinhlungu. Esikhathini esizayo, ukusetshenziswa kolayini okusetshenziswa esizeni kuzoletha umasipala owengeziwe wokuvumela imali engenayo nentela yokuthengisa.
Mhlawumbe ngolunye usuku izintela ziyoba isithako esibiza kakhulu e-cannabis, njengobhiya ngaphambi kwaso. Lokho kuzothatha ushintsho olukhulu oluningi lwemithetho ye-cannabis, kepha khumbula ukuthi ngisho nango-2019 amazwe aseMelika aphasisela amakhulukhulu izichibiyelo emithethweni yawo yotshwala. Ukushintsha ezingeni lomthetho kuthatha isikhathi, kepha futhi akuyeki.